त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको जिम्मा लिने चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्सन्ट्रक्सन सम्पर्कविहीन – Medianp
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको जिम्मा लिने चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्सन्ट्रक्सन सम्पर्कविहीन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३०, २०७५११:०९0
काठमाडौं, ३० जेठ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको जिम्मा लिने चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्सन्ट्रक्सन सम्पर्कविहीन भएको छ ।
यसअघि स्पेनको कम्पनीले समयमा काम नगर्दा त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार तीन वर्ष ढिला भएको थियो । नौ महिनाअघि ठेक्का सम्झौता गरेदेखि सांघाई कन्सन्ट्रक्सन सम्पर्कविहीन भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । जसका कारण धावनमार्ग विस्तारको काम फेरि दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको बताइएको छ ।
सम्झौता गरेको वर्ष दिन पुग्न लाग्दासमेत सम्पर्कमा नआएपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोड्न लागिएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
६ वर्षअघि थालिएको विमानस्थल विस्तारको चारवटा निर्माण कार्यमध्ये धावनमार्ग दक्षिणतिर तीन सय मिटर लम्ब्याउने जिम्मा उक्त कम्पनीले लिएको थियो । पहिले नै तीन वर्ष ढिला भएको निर्माण थाल्न अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा फेरि समय लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको विमानस्थल विस्तारको काम एसियाली विकास बैंकको सात करोड अमेरिकी डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान सहयोगमा सन् २०१२ देखि थालिएको थियो ।
विभिन्न चार खण्डमा भइरहेका काममध्ये पार्किङ विस्तारको काममा पनि ठेक्का हुन नसकेको बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा मात्र धावनमार्ग भएकाले हवाई उडान असुरक्षित भएको भन्दै धावनमार्ग विस्तार गर्न थालिएको थियो । वर्तमान सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र गर्ने, आन्तरिक उडानका लागि काभ्रेको नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउन भन्दै अध्ययन अघि बढाएको छ ।
यस पटकको विश्वकप कसले जित्छ ? के भन्छन नेपाली कलाकार ?
अमेरिकाले बाह्रबिसेमा बनाइदिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेपाललाई हस्तान्तरण